जाडो « Pariwartan Khabar
यसपालि मध्य मङ्सिरअघि नै चिसो छिप्पिएको छ । महोत्तरीसहितका मध्यपूर्वी तराईमा यसपालि मध्य मङ्सिरअघि नै चिसोको कहर बढेको हो । विगत वर्षमा पुस लागेपछि बढ्ने गरेको चिसो हावा बहने क्रम
जाडोयाम सुरु भएसँगै बालबालिकादेखि वृद्धसम्म छालाको समस्या देखिने गरेको छ । छाला सुक्खा हुने, रातो हुने, फुट्ने, खस्रो हुने समस्या देखिने गरेको छ । थोरै मात्र चनाखो हुन सके यसबाट
किन बढ्छ, जाडोमा जोर्नीको दुखाई?
०५ पुष २०७६, काठमाडौं गर्मीभन्दा बढी जाडोमा अस्वस्थ व्यक्तिहरु प्रभावित हुने गर्दछन्। चिसो बढेसँगै कतिपयः व्यक्तिहरुको जोर्नीको दुखाई पनि बढ्न सुरु गर्छ। चिसोको पारोसँगै दुखाई पनि उत्तिकै बढ्ने भएपश्चात् बिरामीलाई
यस्ता छन्,चिसोमा सुन्तला खानुका फाइदाहरु!
२९ मंसिर २०७६, काठमाडौं कतिपयः मानिसको जाडोमा सुन्तला खानुहुँदैन भन्ने धारणा छ। तर चिसो मौसमसँगै चिसो ठाउँमा फल्ने सुन्तलाको महत्व नै बेग्लै हुन्छ। सुन्तला स्वादको लागि मात्रै नभई स्वास्थ्यको हिसाबले
जाडोमा निमोनियाको खत्राः बालबालिकालाई यसरी बचाउनुहोस्
२७ मंसिर २०७६, काठमाडौं निमोनिया फोक्सोमा हुने रोग हो। जसमा फोक्सोमा रहेका हावा भरिने थैलीहरुमा संक्रमणका कारण पानी र पिप जम्मा हुन्छ। निमोनियाको प्रमुख कारण संक्रमण नै हो। संक्रमण विभिन्न
जाडोमा सेक्सलाई कसरी रोचक बनाउने? यसो गर्नुहोस्…
२७ मंसिर २०७६, काठमाडौं नेपाली समाजमा सेक्सलाई अझै पनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। प्राकृतिक प्रक्रिया मानिएको सेक्सका बारेमा नेपाली समाजमा खुलेर बहस भने कमै मात्रामा हुने गर्दछ। जीवित प्राणीको जिवन
यी हुन् जाडोमा स्वस्थ अनि उपयोगी तरकारी
२६ मंसिर २०७६, काठमाडौं जाडोयाममा शरिरलाई चिसोसँगै विभिन्न संक्रमणबाट बचाउन खानपानमा विशेष ध्यान जरुरी छ। यो बेला खानामा प्रशस्त मात्रामा सागसब्जी वा तरकारी समावेश गरेमा चिसोबाट बच्न सकिन्छ। त्यसैले जाडोयाममा
२५ मंसिर २०६४ मौसमी परिवर्तनले शरिरलाई निकै प्रभाव पार्दछ। अत्यधिक चिसोका कारण रुघा, खोकी, एलर्जी र ज्वरो जस्ता समस्याहरु देखिन्छन्। मानिस कुनै निश्चित वातावरणसँग छिट्टै घुलमिल हुनुको साट्टो जाडोका कारण
रूघाखोकी अर्थात् चिसोका रोगहरूबाट बच्न यसो गर्नुहोस्…….
०८ कार्तिक २०७६, काठमाडौं काठमाडौं लगायत देशभर जाडो महिना शूरु भईसकेको छ। जाडो महिनाको सुरुवातसँगै स्वास्थ्यमा कैयौं समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन्। त्यसैले, जाडोयाममा हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। चिकित्सकहरुका